သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီး အား ကောင်းကျိုးလိုရာ စွမ်းအား သတ္တိ ရရှိလာအောင် စနစ်တကျ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း – Zartiman
သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီး အား ကောင်းကျိုးလိုရာ စွမ်းအား သတ္တိ ရရှိလာအောင် စနစ်တကျ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း
သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်သည် နာနာဘာဝ ဝိနာဘာဝ အဝရုဒ္ဓက နတ်ဆိုး ဘီလူးဆိုးမှန်သမျှကို နိုင်နင်းတော့ သည်။ အနာရောဂါ အမျိူးမျိူး ကင်ဆာရောဂါ အမျိူးမျိူးပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။ ဤ သ်ု့ကျင့်ဆောင် လာခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်၏ စွမ်းအားသတ္တိ ဝင်ရောက်လာမှု့ကြောင့် ဂါထာ စွမ်းအားတက် လာသောကြောင့် ရေကိုကိုင်၍သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကို ရွတ်လျှင်ရေဆူ လာသည်။
သံပုရာရည် ရှောက်ရည် တို့ကို ကိုင်၍ ရွတ်ဖတ် လျှင်အချဉ် ဓာတ်ပျောက်၍ အချိူဓာတ်ဖြစ် လာနိုင်တော့ ၏ ။နံနက် အရုဏ်တက် ချိန် ၅ နာရီ တွင် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော် ကြီး အား ရွတ်ဖတ် ရပါမည် ။ရွတ်ဖတ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါလျှင် ကိုယ်လက် သန့်ရှင်းခြင်း ခန္ဓာ ကိုယ် သန့်ရှင်းခြင်း သန့်ရှင်းသော အဝတ်စားကို ဝတ်ဆင်ခြင်း ရဟန်းမှန်သမျှ ဒေသနာကြားခြင်း ကိစ္စ ကိုဆောင်ရွက် ရပါမည် ။
၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် တို့အား ရည်စူး၍ ဆွမ်း ၉ ပွဲ ရေ ၉ ခွက် ပန်း ၉ ပွင့် ဖယောင်းတိုင် ၉တိုင်ထွန်း အမွှေးတိုင် ၉ တိုင် ထွန်း ၍ ကပ်လှု ပူဇော် ရမည်။ ပြီးနောက်၅ ပါး သီလ တော်ကို ခံယူ ဆောက်တည်ပါ ။ နတ်များကို ဖိတ်ကြား ရပါ မည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင် အပေါင်း အားရည်စူး၍ ရည်မှန်း၍ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်မြတ်ကြီးအား ၁၀၈ ခေါက် တိတိ ရွတ်ဖတ်၍ ပူဇော် ကန်တော့မည် ဖြစ်ပါ၍ အရှေ့နေထွက် အနောက်နေဝင် တောင်မှာတံငါကွန်နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူဝံကြယ် အောက်မှာ အဝီစိ အထက်မှာ ဘဝဂ် ဤ အတွင်းမှာ တည်ရှိနေထိုင် ကြကုန်သော အလုံး စုံသော တောစောင့်နတ်များ။
တောင်စောင့်နတ်များ ရုက္ခစိုးနတ်များ ဘုမ္မစိုးနတ်များ အာကာသ စိုးနတ်များ ကမ္ဘာစောင့်နတ် မြို့စောင့်နတ် နယ်စောင့်နတ်ရွာစောင့်နတ် ရက်ကွက်စောင့်နတ် ကျောင်းစောင့်နတ် မိုးနတ်သား လေနတ်သား ရေနတ်သား လနတ်သားသမ္မာဒေဝနတ် များသာသနာတော် စောင့် နတ်များ သူရဿတီ ဒေဝီနှင့် တကွ ဒေဝီ (၇) ပါး ဒေဝီ (၉) ပါးဒေဝီ (၁၂) ပါး ဓဋ္ဌရဌ ဝိရုဠက ဝိရုပက္ခ ကုဝေရ။
စသောစတုမဟာနတိမင်းကြီး ၄ ပါး သိကြားမင်းနှင့် တကွ ၃၃ ကျိတ်သော နတ်မင်း နတ်မြတ် နတ်ဒေဝါ အပေါင်းနှင့်တကွ သူရဿတီ မကြွင်းခပင်းများစွာ နတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းတို့ ဖိတ်ကြား ပါ၏ ။ ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ ။တရားနာယူရန် ကြွတော်မူုကြပါကုန်လော့..။ဤ အချိန်ဤ အခါသည် ကား သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်မြတ်အား (၁၀၈) ခေါက်တိတိ ရွတ်ဖတ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်မြတ်ကို အတူတကွ နာယူကြ ပါရန်။
ဤနေရာ ဤ ဌာန ဤ အိမ်ဂေဟာသို့ ဖိတ်ကြားပါ၏ ။ပန်ကြားပါ၏ ။ ဖိတ်ခေါ် ပါ၏ ။ တရားတော်မြတ် ဂါထာတော်မြတ် ကို နာယူရန် အတွက်ကြွရောက်တော်မူကြပါ ကုန်လော့…. ။ ”ထိုသို့ နတ်များအား ဖိတ်ကြားပြီးလျှင် ဘုရားရှေတော်တွင် တည်ငြိမ်စွာ ထိုင်၍ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာ တော်ကြီးအားလေးလေးပင်ပင် ၁၀၈ ခေါက် ရအောင် ရွတ်ဖတ် ရာ၏ ။
၁၀၈ ခေါက် တိတိ ရွတ်ဖတ်ပြီး ပါလျှင် ဂါထာတော်ကြီး၏ အနက်အဖွင့် ကို အသံကျယ်ကျယ်ရွတ်ဖတ်ရာ၏။ ပြီးစီးပါက ပင့်ဖိတ်ကြားထား သော နတ်များအား ၎င်းသတ္တဝါ များ အား၎င်း သူတော်ကောင်းအရိယာများအား၎င်း အမျှပေးဝေရာ၏ ။အမျှပေးဝေပြီးနောက် မိမိ တက် နိုင်သ၍ မေတ္တာပို့ပေးပါ။ လိုအပ်သော အလိုရှိသော ကိစ္စ အကြောင်းအရာအတွက် ဆု့တောင်းပါ ။
ဤ အချက် များနှင့်ညီညွတ်အောင် ကျင့်ဆောင်ပါလျှင် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာ၏ အစွမ်းသတ္တိ ဝင်လာပါတော့ သည်။ ဂါထာ အစွမ်း ထက်မြတ် လာတော့၏ ။ မိမိဆောင်ရွက် တိုင်း အကျိူးပေးနေတာ့ သည် ။ နေ့စဉ် ကျင့်ဆောင် ပါလျှင် သြဇာအာဏာကြီးလာ ပါသည်။ပြောတိုင်း ဆိုတိုင်း လုပ်တိုင်း ကြံစည်တိုင်း အောင်မြင် လာပါတော့ သည်။
ဘေးရန်အန္တရာယ် ကင်းဝေး ပပျောက်ရသည်။ မကောင်းသော အမင်္ဂလာ မှန်သမျှ ကင်းဝေးပပျောက်ရ၏ ။
သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာတျောကွီး အား ကောငျးကြိုးလိုရာ စှမျးအား သတ်တိ ရရှိလာအောငျ စနဈတကြ ရှတျဖတျပူဇျောနညျး
သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာတျောသညျ နာနာဘာဝ ဝိနာဘာဝ အဝရုဒ်ဓက နတျဆိုး ဘီလူးဆိုးမှနျသမြှကို နိုငျနငျးတော့ သညျ။ အနာရောဂါ အမြိူးမြိူး ကငျဆာရောဂါ အမြိူးမြိူးပြောကျကငျး စနေိုငျသညျ။ ဤ သျု့ကငျြ့ဆောငျ လာခဲ့သော ပုဂ်ဂိုလျသညျ သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာတျော၏ စှမျးအားသတ်တိ ဝငျရောကျလာမှု့ကွောငျ့ ဂါထာ စှမျးအားတကျ လာသောကွောငျ့ ရကေိုကိုငျ၍သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာတျောကို ရှတျလြှငျရဆေူ လာသညျ။
သံပုရာရညျ ရှောကျရညျ တို့ကို ကိုငျ၍ ရှတျဖတျ လြှငျအခဉျြ ဓာတျပြောကျ၍ အခြိူဓာတျဖွဈ လာနိုငျတော့ ၏ ။နံနကျ အရုဏျတကျ ခြိနျ ၅ နာရီ တှငျ သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာတျော ကွီး အား ရှတျဖတျ ရပါမညျ ။ရှတျဖတျမညျ့ ပုဂ်ဂိုလျမှာ လူပုဂ်ဂိုလျ ဖွဈပါလြှငျ ကိုယျလကျ သနျ့ရှငျးခွငျး ခန်ဓာ ကိုယျ သနျ့ရှငျးခွငျး သနျ့ရှငျးသော အဝတျစားကို ဝတျဆငျခွငျး ရဟနျးမှနျသမြှ ဒသေနာကွားခွငျး ကိစ်စ ကိုဆောငျရှကျ ရပါမညျ ။
၅၁၂၀၂၈ ဆူကုနျသော ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျ တို့အား ရညျစူး၍ ဆှမျး ၉ ပှဲ ရေ ၉ ခှကျ ပနျး ၉ ပှငျ့ ဖယောငျးတိုငျ ၉တိုငျထှနျး အမှေးတိုငျ ၉ တိုငျ ထှနျး ၍ ကပျလှု ပူဇျော ရမညျ။ ပွီးနောကျ၅ ပါး သီလ တျောကို ခံယူ ဆောကျတညျပါ ။ နတျမြားကို ဖိတျကွား ရပါ မညျ။
ကြှနျုပျသညျ ၅၁၂၀၂၈ ဆူကုနျသော ဗုဒ်ဓ ဘုရားရှငျ အပေါငျး အားရညျစူး၍ ရညျမှနျး၍ သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာတျောမွတျကွီးအား ၁၀၈ ခေါကျ တိတိ ရှတျဖတျ၍ ပူဇျော ကနျတော့မညျ ဖွဈပါ၍ အရှနေ့ထှေကျ အနောကျနဝေငျ တောငျမှာတံငါကှနျနက်ခတျ မွောကျ မှာ ဓူဝံကွယျ အောကျမှာ အဝီစိ အထကျမှာ ဘဝဂျ ဤ အတှငျးမှာ တညျရှိနထေိုငျ ကွကုနျသော အလုံး စုံသော တောစောငျ့နတျမြား။
တောငျစောငျ့နတျမြား ရုက်ခစိုးနတျမြား ဘုမ်မစိုးနတျမြား အာကာသ စိုးနတျမြား ကမ်ဘာစောငျ့နတျ မွို့စောငျ့နတျ နယျစောငျ့နတျရှာစောငျ့နတျ ရကျကှကျစောငျ့နတျ ကြောငျးစောငျ့နတျ မိုးနတျသား လနေတျသား ရနေတျသား လနတျသားသမ်မာဒဝေနတျ မြားသာသနာတျော စောငျ့ နတျမြား သူရဿတီ ဒဝေီနှငျ့ တကှ ဒဝေီ (၇) ပါး ဒဝေီ (၉) ပါးဒဝေီ (၁၂) ပါး ဓဋ်ဌရဌ ဝိရုဠက ဝိရုပက်ခ ကုဝရေ။
စသောစတုမဟာနတိမငျးကွီး ၄ ပါး သိကွားမငျးနှငျ့ တကှ ၃၃ ကြိတျသော နတျမငျး နတျမွတျ နတျဒဝေါ အပေါငျးနှငျ့တကှ သူရဿတီ မကွှငျးခပငျးမြားစှာ နတျဗွဟ်မာ အပေါငျးတို့ ဖိတျကွား ပါ၏ ။ ဖိတျချေါပါ၏ ။တရားနာယူရနျ ကွှတျောမူုကွပါကုနျလော့..။ဤ အခြိနျဤ အခါသညျ ကား သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာတျောမွတျအား (၁၀၈) ခေါကျတိတိ ရှတျဖတျမညျဖွဈပါ၍ တရားတျောမွတျကို အတူတကှ နာယူကွ ပါရနျ။
ဤနရော ဤ ဌာန ဤ အိမျဂဟောသို့ ဖိတျကွားပါ၏ ။ပနျကွားပါ၏ ။ ဖိတျချေါ ပါ၏ ။ တရားတျောမွတျ ဂါထာတျောမွတျ ကို နာယူရနျ အတှကျကွှရောကျတျောမူကွပါ ကုနျလော့…. ။ ”ထိုသို့ နတျမြားအား ဖိတျကွားပွီးလြှငျ ဘုရားရှတေျောတှငျ တညျငွိမျစှာ ထိုငျ၍ သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာ တျောကွီးအားလေးလေးပငျပငျ ၁၀၈ ခေါကျ ရအောငျ ရှတျဖတျ ရာ၏ ။
၁၀၈ ခေါကျ တိတိ ရှတျဖတျပွီး ပါလြှငျ ဂါထာတျောကွီး၏ အနကျအဖှငျ့ ကို အသံကယျြကယျြရှတျဖတျရာ၏။ ပွီးစီးပါက ပငျ့ဖိတျကွားထား သော နတျမြားအား ၎င်းငျးသတ်တဝါ မြား အား၎င်းငျး သူတျောကောငျးအရိယာမြားအား၎င်းငျး အမြှပေးဝရော၏ ။အမြှပေးဝပွေီးနောကျ မိမိ တကျ နိုငျသ၍ မတ်ေတာပို့ပေးပါ။ လိုအပျသော အလိုရှိသော ကိစ်စ အကွောငျးအရာအတှကျ ဆု့တောငျးပါ ။
ဤ အခကျြ မြားနှငျ့ညီညှတျအောငျ ကငျြ့ဆောငျပါလြှငျ သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာ၏ အစှမျးသတ်တိ ဝငျလာပါတော့ သညျ။ ဂါထာ အစှမျး ထကျမွတျ လာတော့၏ ။ မိမိဆောငျရှကျ တိုငျး အကြိူးပေးနတော့ သညျ ။ နစေ့ဉျ ကငျြ့ဆောငျ ပါလြှငျ သွဇာအာဏာကွီးလာ ပါသညျ။ပွောတိုငျး ဆိုတိုငျး လုပျတိုငျး ကွံစညျတိုငျး အောငျမွငျ လာပါတော့ သညျ။
ဘေးရနျအန်တရာယျ ကငျးဝေး ပပြောကျရသညျ။ မကောငျးသော အမင်ျဂလာ မှနျသမြှ ကငျးဝေးပပြောကျရ၏ ။